प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्म मिति नभएको नागरिकता ! कक्षा १० चितनवनमा, एसएलसी वीरगञ्‍जबाट — OnlineDabali
काठमाडौं । दुई नागरिकता लिएको भन्दै विवादमा रहेको प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता प्रमाणपत्र सार्वजनिक भएको छ । जन्म मिति सच्याइएको भनिएको नागरिकतामा पराजुलीको जन्म २०१६ बैशाख १६ गते उल्लेख छ ।
पराजुलीले नागरिकताको प्रतिलिपी काठमाडौँबाट लिएका छन् । सुरुको नागरिकता र प्रतिलिपीमा फरक फरक जन्म मिति भएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।
पराजुलीले सुरुमा तनहुँबाट नागरिक प्रमाणपत्र लिएको तर त्यसमा भएको जन्ममिति सल्याउन काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रतिलिपी लिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
तनहुँबाट लिएको नागरिकतामा जन्ममिति छुटेको र उमेर मात्रै लेखिएका कारण प्रतिलिपी लिइएको बताइएको छ । अरु शैक्षिक प्रमाण पत्रको उमेरअनुसार नागरिकतामा उमेर सच्चाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट प्रतिलिपी लिइएको हो ।
काठमाडौंबाट लिइएको प्रतिलिपि नागरिकतामा नम्बर १८०३/४४१/३०१० उल्लेख छ । केरमेट भएका कारण नागरिकतामा उल्लेख कुरा प्रष्ट देख्न सकिदैनन् ।
त्यसैगरी अर्को विवादमा रहेका एसएलसीको शैक्षिक प्रमाणपत्र हो । सार्वजनिक भएको प्रमाणपत्रअनुसा वीरगंजको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट एसएलसी उतिर्ण गरेको देखिएको छ भने कक्षा १० चितवनको शारदा माविमा पढेको भेटिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे विवाद थियो । शुशीला कार्कीले छोडेपछि पराजुलीले पहिलो निर्णय आफ्नो विवादित नागरिकता र प्रमाणपत्रबारे गरेका थिए ।
पराजुलीलाई कारवाहीको माग गर्दैै डा. गोविन्द केसी अनुसन बसेका थिए । केसीले शैक्षिक योग्यता नपुगेको र दुईवटा नागरिकता लिएको, भ्रष्ट, माफिया र गुण्डा भएको आरोप लगाउँदै कारवाहीको माग गरेका थिए ।
यसैबीच प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले अाफ्ना प्रमाणपत्रहरु सडकमा देखाउँदै नहिड्ने बताएका छन् । पूर्वी रुकुमको जिल्ला अदालतको उद्घाटन गर्दै पराजुलीले पुष्ट नभएका अारोप कसैमाथि पनि लगाउन नमिल्ने बताए ।